Which Version of Lord's Prayer Is Right? – 2trondro
Home / Fiangonana / Issues / Which Version of Lord's Prayer Is Right?
Ny valiny fohy: na. Noho izany:
Nahoana Katolika matetika miala ny teny eny amin'ny faran'ny ny Vavaka Nampianarin'ny Tompo?
Raha ny marina, Katolika dia afaka ny hitanisa ny vavaka na miaraka sy tsy misy ireo teny ireo, ary izy ireo no anjara azy ireo amin'ny sasany Parish lamesa.
Ny Tompo Ny vavaka dia tsy manam-paharoa amin'ny olona rehetra ny vavaka satria dia nampianarin'i Jesosy mihitsy no.
Katolika mahazatra manondro azy io ho toy ny "Rainay,"Araka ny fampianarana voatolotry ny razana fahiny mampiasa ny teny roa voalohany amin'ny vavaka mba hilaza izany, oh, Arahaba ry Maria, Glory Be, sns.
Katolika sy ny tsy Katolika tsianjery samihafa indraindray dikan io vavaka. matetika, ny katolika dika mifarana amin'ny andian-teny hoe "manafaha anay amin'ny ratsy,"Raha ny tsy-katolika dika avy eo ahitana, "Fa Anao ny fanjakana, ny hery, ary ny voninahitra, amin'izao fotoana izao sy ho mandrakizay. "Ireo teny fanampiny mitambatra teny fiderana, fohy, flowery andininy fiderana appended ny vavaka.
Ny toa discrepancy eo amin'ny roa dikan 'ny Vavaka Nampianarin'ny Tompo voajanahary mahatonga olona mba hanontany izay fomba mivavaka dia ny fomba tany am-boalohany i Jesoa nampianatra.
Ity vavaka ity dia voarakitra ao amin'ny roa amin'ireo efatra Gospels-Matthew ary Luke. Tantara roa ireo indrindra toy izany koa ny sasany phrasing nesorina in Luke. Jesosy, miezaka ny hampianatra ny mpanara-dia ny fomba fivavaka, hoy:
"Rainay Izay any an-danitra, hohamasinina anie ny anaranao. Tonga anie ny fanjakanao. Hatao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay; ary mamelà ny helokay, tahaka anay aminareo koa namelanay izay meloka taminay; Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, Fa manafaha anay amin'ny ratsy " (Matthew 6:9-13; Roman Catholic Version, Katolika Edition).
Sasany teny amin'ny Matthew, indrindra indrindra fa ny King James Version, novokarina tamin'ny taonjato fahafito, Anisan'izany ny voalaza etsy ambony teny fiderana ho an'i Jehovah ny Vavaka. Ny ankamaroan'ny sora-tanana tranainy indrindra sisa velona, na izany aza, aza. Tokony koa hoe, koa, fa ny teny fiderana tsy hita ao misy fandikana Luke. Dia toy izany no, Misy mihevitra fa ny teny fiderana tsy anisan'ny Baiboly tany am-boalohany lahatsoratra, fa nampidirina tatỳ aoriana noho ny mpanora-dalàna ao amin'ny dingan'ny fandikana azy io. Azo inoana fa ny teny fiderana tamin'ny voalohany voasoratra ao amin'ny sisiny, ary tamin'ny farany dia tonga mba ho tafiditra ao amin'ny lahatsoratra lehibe tao amin'ny sora-tanana sasany ny tsipika.
Raha ny teny fiderana no tsy hita ao amin'ny sora-tanana manam-pahefana indrindra ao amin'ny Baiboly, ny fomban-drazana 'ny Tompo ny vavaka mandeha teny fiderana ny rehetra niverina ho any amin'ny tany am-boalohany am-polony taona ny finoana. Ny antontan-taratasy Fiangonana fahiny fantatra amin'ny anarana hoe ny Didache (no-ah-Kay), ohatra, izay angamba efa voasoratra ao amin'ny faramparan'ny taonjato voalohany taorian'i Kristy, indrindra tamin'izany andro izany araka ny Testamenta Vaovao, dia ahitana ny teny fiderana.
The Didache dia tsara Katolika antontan-taratasy-fanehoana finoana momba ny batisa, ny Lamesa, ary Fiaiken-keloka izay mifanaraka amin'ny zavatra ampianarin'ny Fiangonana Katolika ankehitriny. Ny fomba amam-panao ny fanampiana ny teny fiderana amin'ny faran'ny ny Vavaka Nampianarin'ny Tompo, avy eo, toa tena mba ho anisan'ny Katolika fomban-drazana. Ary raha izany no mino ny fohy dikan-ny vavaka angamba no dikan izay Matthew am-boalohany nanoratra, samy dika tanteraka ao aminy no azo ekena ho an'ny Katolika mba hivavaka. Raha ny tena izy, ny teny fiderana no tapaka tsianjery ny Katolika ankehitriny, raha ny ny Ray no nivavaka tao Mass.